Amparafaravola sy Ambatondrazaka: antsoina hijinja vary ny olona any Alaotra Mangoro | NewsMada
Amparafaravola sy Ambatondrazaka: antsoina hijinja vary ny olona any Alaotra Mangoro
Par Taratra sur 07/05/2021
Maika ny fijinjana vary any amin’ny distrikan’Amparafaravola sy Ambatondrazaka, amin’izao efa tokony ho fotoam-pijinjana izao. Samy manana ny heviny ny tompon’andraiki-panjakana sy ny mpamboly sasany.
Mikatona ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra noho ny hamehana ara-pahasalamana, tsy ahafahan’ireo mpikarama mpijinja vary avy any Vakinankaratra midina any Alaotra, toy ny fanaony isan-taona. Koa miantso ny olona any Alaotra Mangoro ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana, ny jono (Maep) sy ny faritra Alaotra Mangoro hisoratra anarana any amin’ny fokontany na kaominina misy azy. Fepetra takina amin’izany, olona feno 18 taona no ho miakatra, salama saina sy vatana tsara, vonona hiasa hijinja sy hanonta vary. 70 000 Ar hatramin’ny 100 000 ariary isaky ny hekitara ny karama miampy vary akotry dimy vata. Taratasy ilaina: kara-panondro, fanamarinam-ponenana, pasipaoro. Tsy miova toy ny andavanandro ny saran-dalana. Ampirisihina izay tsy manana laharana finday hifandraisana hitambatra lisitra amin’ireo izay manana mba hahamora ny fifandraisana.
Tsy mahazatra ny mponina any Alaotra
Milaza ny fahitany ny toe-javatra anefa ny ankamaroan’ireo mpamboly fa tsy mahazo antoka ity fepetra ity. Ny antony, tsy mahazatra ny mponina any Alaotra ny mandidy sy manonta vary fa isan-taona izy ireo maka mpikarama avy any Vakinankaratra sy Ambatolampy, efa zatra sy haingam-piasa. Tokony hisy fepetra manokana hamelana azy ireo ho any Alaotra, toy ny tamin’ny taona 2020, nanaja ny fenitra ara-pahasalamana.
Ny loza mananontanona izao ny vary hihintsana eny an-tsaha rehefa tratra aoriana ny fijinjana azy, na sanatria hilatsahan’ny havandra toy ireny nitranga tany Moramanga ireny. Koa anjaran’ny tompon’andraikitra ny mandanjalanja ny fanapahan-kevitra raisina.